कांग्रेसका शीर्षनेताहरु गुप्तवासमा, एक महिनादेखि भेटघाटै समेत छैन::जय नेपाल न्यूज
कांग्रेसका शीर्षनेताहरु गुप्तवासमा, एक महिनादेखि भेटघाटै समेत छैन
काठमाडौं । कोरोनाका कारण महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएपनि समयमै महाधिवेशन गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु उदासीन देखिएका छन् । कोरोनाको कहरका बावजुद पार्टीका यथासम्भव गतिविधिहरु कायम राख्नुपर्ने हो । तर नेताहरु कोरोनाको कारण देखाउँदै घरमै गुप्तवासमा छन् ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आगामि फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार काम हुन सकेको छैन । एक महिनाअघि क्रियाशील सदस्यको संख्या शतप्रतिशत थप गर्ने सहमति गर्नका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु भेला भएका थिए । त्यसयता उनीहरुबीच संवाद हुन सकेको छैन ।
जानकारहरुका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल , उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र बिजयकुमार गच्छादार तथा महामन्त्रीहरु डा.शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काबीच महिनादिन यता भेटघाट समेत भएको छैन । शतप्रतिशत क्रियाशील सदस्यता थप गर्ने सहमति भएको बैठक लगत्तै उपसभापति निधिले सभापति देउवालाई आफू आसन्न महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्नेबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसयता देउवा र निधिबीचपनि भेटघाट भएको छैन ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निषेधाज्ञा सुरु भएसंगै सबै भेटवार्ता स्थगित गरेका थिए । पौडेलको सचिवालयले वक्तव्य नै निकालेर टेलिफोन र भर्चुअल माध्यमबाट सम्पर्क बढाइने र तत्कालका लागि प्रत्यक्ष राजनीतिक भेटघाट स्थगन गरिएको जनाएको थियो । त्यस्तै महामन्त्री डा. शशांक कोइरालापनि निषेधाज्ञा लागु भएयता महाराजगञ्जस्थित निवासबाट बाहिर निस्केका छैनन् । सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको कोभिड १९ अनुगमन समितिको कामका दौरान सभापति देउवालाई भेटेका थिए । पूर्व महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि प्रत्यक्ष भेटभन्दा टेलिफोन संवाद र भर्चुअल बैठकलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
महाधिवेशनको चर्चासंगै उम्मेदवार घोषणा र जुम संवादहरुमा कांग्रेसका नेताहरु बढी व्यस्त हुन थालेका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेल, उपसभापति निधि र महामन्त्री डा. कोइरालाले दैनिकजसो विभिन्न संस्थाले आयोजना गर्ने जुम भिडियो कन्फ्रेन्समा सम्बोधन गर्दै आएका छन् । कोरोनाका बावजुद पार्टीका महत्वपूर्ण विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच नियमित संवाद हुन जरुरी रहेको कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको भनाई छ । ‘सजगताका अपनाएर भएपनि पार्टीका महत्वपूर्ण विषयमा नेताहरु छलफलमा बस्नुपर्छ । महाधिवेशन कार्यतालिका र क्रियाशील सदस्यतामा भएको विवादबारे छलफल नगरेर नेताहरु गुप्तवास बस्नु राम्रो होइन ।’, कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।